प्रमोसन भएपछि ‘ट्रीट’ दिन्छु भनेर मुस्कुराउँदै थिइन्, तर सबैलाई रुवाएर संसार छो’डिन् सुमिताले…! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रमोसन भएपछि ‘ट्रीट’ दिन्छु भनेर मुस्कुराउँदै थिइन्, तर सबैलाई रुवाएर संसार छो’डिन् सुमिताले…!
काठमाडौं । मेगा बैंक लिमिटेडमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण नि’धन भएको छ । बैंकको अपरेशन विभागमा कार्यरत सुमिता शाक्यको कोरोनाको कारण नि’धन भएको हो । सिएको पढाइसँगै बैंकिङमा करियर बनाउंदै गरेकी उनलाई कोरोना भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । तर अन्तत: उनको नि’धन भएको छ । उनको अ’सामयिक नि’धनमा बैंकले दु:ख व्यक्त गरेको छ ।
उनी लामो समयदेखि क्या’न्सरबाट पी’डीत थिइन् । क्या’न्सर भएपनि काममा ल’गनशील सुमिता अ’डिट विभागमा कार्यरत थिइन् । पछि बैंकको अ’परेशन विभागमा काम गर्दै आएकी उनले प्र’मोसनका लागि आ’वेदन समेत दिएकी थिइन् । प्रमोसनका लागि हुने अन्तर्वार्तामा समेत उनले आफुसँग आ’त्मविश्वास रहेको बताएकी थिइन् ।
ज्यानमा क्या’न्सर भएपनि सधैं आफुमाथि विश्वास गर्ने सुमिता क्या’न्सरसँग त ल’डिरहेकी थिइन् नै, त्यहि बेला पा’पी कोरोनाले पनि ज्यानमा बास गरेपछि अन्तत: उनलाई ब’चाउन सकिएन । क्या’न्सरका कारण केहि समय यता ज्यान निकै क’मजोर त भएको थियो, तर आफु क’मजोर छु भन्ने कुरा उनले कहिले पनि देखाउने गर्दिनथिइन् ।
उनका सहकर्मीहरु भन्छन्- ‘बैंकमा काम गर्दा उनी क्या’न्सरसँग जु’धीरहेकी छिन् भन्ने प’त्याउन नै गाह्रो हुन्थ्यो । काममा निकै ल’गनशील भएर ला’ग्थिन् ।
प्रमोसन भएपछि ‘ट्रीट’ दिन्छु भनेर मु’स्कुराउँएको हिजो जस्तो लाग्छ, तर सबैलाई रुवाएर उनले संसार छो’डेको पनि महिना दिन हुन लागिसकेछ!’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने उनको नि’धन कोरोनाकै कारण भएको रेकर्ड राखेको छ । उनी कोरोनाका कारण नि’धन भएकी सम्भवत: पहिलो महिला कर्मचारी हुन् ।
ससुराली गएका श्रीमानको आफ्नै श्रीमती ले ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या
प्रम ओलीले दिए प्रचण्डलाइ यस्तो झट्काः म एमाले बनाउँछु, तपाई जे गर्ने हो गर्नुस !